Oge nke ịdị ọcha, ngosipụta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Ndị edemede, Novela, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Oge nke Imeghị Ihe bu ihe edeputara na narita abuo nke iri abuo, nke onye edemede ama ama ama America Edith Wharton dere Ọ bụ akụkọ ịhụnanya nke mere na New York elu ọha mmadụ nke narị afọ gara aga. Na nke a, ndị protagonists ga-alụ ọgụ megide oke na omenaala nke ndị ọkachamara n'oge ahụ guzobere.
Akwụkwọ ọgụgụ —Na 1870— bụ otu n'ime akwụkwọ ndị kacha rịọrọ na ọba akwụkwọ na New York akwụkwọ na 20s. N'otu aka ahụ, aha ahụ nwetara Pulitzer Nrite na 1921. Nke a bụ akụkụ nke ọrụ ahụ ka a gbanwere ya maka ogbo ahụ na ugboro atọ maka nnukwu ihuenyo (1924, 1934 na 1993).
1 Oge nke Imeghị Ihe
1.2 Ọhụụ Newland Archer nke Ọhụụ
1.3 Na-ahụ n'anya atọ
1.4 Mmegharị ihe nkiri
2.2 Marriagelụ di na nwunye
2.3 Agha Worldwa Mbụ
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ịhụnanya nke ebipụtara na 1920, nke edepụtara na New York nke 1870. Nkata ahụ metụtara ezinụlọ nke ndị New York, bụ ndị biri ndụ dị elu, na-aga opera na nzukọ na nnọkọ oriri na ọ partiesụ ,ụ, nri abalị na ịgba egwu. Na ọrụ, Wharton na-akọwa oke ntọala na ihe omume n'ụzọ zuru ezu dịka o nwere ekele maka ha n'oge ahụ.
Onye edemede ahụ mere ka akụkọ ahụ dabere na ahụmahụ ya. Nke kacha puta ihe bu ntunye aka nke akparamagwa nke ndi ogaranya n’obodo ha si bia, onye ekpechara ndi pere mpe ma kwenye na ha zuru oke. Na mgbakwunye, gosipụtara eziokwu Europe na afọ ndị ahụ —N'ụzọ nke mmegide -, na enweghi oke klaasị na ọdịnala karịa New York.
Oge nke Emeghị Ihe ...
Akụkọ malitere site na ọkwa nke njikọta n'etiti ndị na-eto eto bụ Newland Archer na May Welland; ma site na ezinụlọ nke ọkwá dị elu. Ọ bụ onye ọka iwu; dọrọ aka na ntị ziri ezi, gbanye mkpọrọgwụ na omenala nke oge ahụ. Ọ bụ nwa agbọghọ dị jụụ, onye nwere ụkpụrụ kachasị mma gụrụ akwụkwọ ma kpebisie ike ịbụ nwunye zuru oke; na-enwe obi ụtọ mgbe niile, mana enweghị ebumnuche ma ọ bụ echiche nke aka ya.
Site na ụbọchị Countess Ellen Olenska erutela New York, onye bu nwa nwanne nne May. Ọ bụ nwanyị mara mma, kwụụrụ onwe ya na nwanyị na-enweghị isi. Nwanyị a nwere mmụọ esila na di ya lọta na Europe, nke ndị obodo America anaghị anabata ya. Asịrị ndị a na-asọ oyi anaghị echere ha amalitekwa imetụta ndị ikwu ha.
Ọhụụ Newland Archer nke Ọhụụ
N'ihi ọnọdụ ọjọọ a, Onye na-agba ụta agwa ya ka ọ gwa Ellen okwu na nzuzo ma mee ka o kwusi usoro ịgba alụkwaghịm. Ka ha na-akparịta ụka, ọ chọpụtara na obi adịghị Ellen ụtọ na ọ lụrụ onye ọ na-ahụ n’anya. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ na - eme ka onye ọkaiwu mara ka ọha mmadụ si ata ahụhụ ebe o biri.
N’ikpeazụ, Ellen kwenyere arịrịọ Archer ma jụ ịgba alụkwaghịm ahụ, ọ bụ ezie na afọ ejughị ya afọ. Havingmara akụkụ nke ọdịbendị nke Europe na-eme ka ọ teta n'ụda ike ọ nọ na ya. Uche onye ọka iwu agbanweela ma ugbu a ọ malitere ịjụ onwe ya n'ihe metụtara ka ezigbo alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ.
Na-ahụ n'anya atọ
Mgbe mkparịta ụka ahụ gasịrị, Newland na Countess ghọrọ ezigbo ndị enyi. N’ihi otú obi dị ya n’ebe ọ nọ, ọ kpebiri iso ya gaa n’ụlọ ezumike nke ụfọdụ ndị ezinụlọ ya. N'ebe ahụ, Onye na-agba ụta mara otú ọ dị Ellen n’ezie; Mmasị ha karịrị ịbụ ndị enyi na ụmụ nwanne nna n'ọdịnihu.
Newland N'agbanyeghị na ọ bụ nwoke dị jụụ na onye ziri ezi, ọ na-enwekarị echiche na-aga n'ihu, na-akatọ ụkpụrụ nke ndị ọkachamara na ya si ebi ndụ. Ọ bụ n'ihi nke ahụ nwara ịhapụ Ellen ihe niile —Onye kweakwara—, ma gị ibu arọ karịa na mechaa luru nwanyi; ọ bụ ezie na mmetụta ya maka Ellen ka na-apụtaghị.
Ọtụtụ ga-abụ ọnọdụ a ga-eweta site na triangle ịhụnanya a, n'etiti mgba nke ihe "ziri ezi" na ihe na-adịghị mma. Ihe odide atọ ahụ ga-emecha mee mkpebi ndị ga-emetụta ndụ onye ọ bụla n’ime has, ya na ngwụcha nke ọtụtụ agaghị atụ anya ya.
Mmegharị ihe nkiri
Oge nke Imeghị Ihe ebubatala na nnukwu ihuenyo na ohere atọs Nke mbụ bụ na 1924, n'ụdị na-agbachi nkịtị na site n'aka Warner Brothers. Ihe nkiri nke abụọ bụ na 1934; Nke a dabere na akwụkwọ akụkọ ahụ ma bụrụkwa nke agbakwunyere site na ederede nke mmegharị ihe nkiri emere afọ isii gara aga - nke e gosipụtara na Broadway na 1928.
Ihe nkiri ikpeazụ iji weghara akụkọ ihe mere eme nke Edith Wharton dere na 1993 site na Columbia Pictures ma Martin Scorsese duziri ya. Ndị na-akwado ya bụ Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer na Winona Ryder; onye na-anọchi anya Newland, Ellen na May, n'otu n'otu. Edere ihe nkiri ahụ maka ọtụtụ ihe nkiri, na-emeri na edemede:
Uwe ejiji kacha mma (Oscar, 1993)
Nwanyị na-akwado nkwado kachasị maka Winona Ryder (Golden Globes, 1993)
Director: Martin Scorsese na onye na-akwado ihe nkiri: Winona Ryder (National Board of Review, 1993)
Onye na-akwado nkwado kachasị mma maka Miriam Margolyes (BAFTA 1993)
Na Fraịdee, Jenụwarị 24, 1862, New York City mụrụ Edith Newbold Jones. Ebe ọ bụ na o si n’otu n’ime ezinụlọ ndị kacha baa ọgaranya n’obodo, ọ gụrụ akwụkwọ n’ụlọ, ya na ndị nkụzi kacha mma. Na mgbakwunye, nwere ohere ileta ọtụtụ obodo ndị bụ isi n'ụwa, ebe ọ bụ na ọ dị ezigbo obere o soro ndị mụrụ ya gaa njem.
Edith ama esima ndiwet n̄kpọ; ọ bụ n'eziokwu, ọ bụ onye precocious. Otú ọ dị, ọrụ ya adịghị ngwa ngwa ibipụta ya, ebe ọ bụ na n'oge ahụ, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya n'anya ka nwanyị nwere ọkwá tinye onwe ya na akwụkwọ. Ọ bụ maka nke a edere ọtụtụ akụkọ mmalite ya na-enweghị aha, na mgbe ụfọdụ n'okpuru aha nzuzo.
Ya na nne na nna ya biri ọtụtụ oge ọ bụ nwata na mpaghara Europe, n'agbanyeghị na ọ na-aga obodo ya New York mgbe niile. Edith jisiri ike gafee Atlantic ihe dị ka ugboro 66, nke mere ka ọ mụta ọtụtụ asụsụ wee mata ụfọdụ ọdịbendị nke ụwa. N’otu aka ahụ, nke a nyere aka mee ka akwụkwọ ya baa ọgaranya ma mee ka ọ dịrị ya mfe inweta ezigbo ezigbo ndị enyi, dị ka nke Henry James.
Ọ lụrụ Edward Robbins Wharton na 1885, mmekọrịta nke a na-ahụghị dị ka nkwekọ, kama ọ bụ ọgba aghara n'ihi ekweghị ekwe n'akụkụ nke onye ọlụlụ ya. Mgbe afọ 28 nke alụmdi na nwunye gasịrị, Edith bụ otu n'ime ụmụ nwanyị mbụ nke ọha mmadụ gbara alụkwaghịm, ihe dị mgbagwoju anya maka oge ahụ, ebe ọ bụ na isiokwu ahụ weere dị ka nkwanye.
Agha Worldwa Mbụ
Ọ bụ ụzọ ya si Europe, Edith anam E jikọtara ya na ọtụtụ ihe omume, gụnyere Agha Worldwa Mbụ. Ka esemokwu ahụ na-eme, E kwere ka ọ gaa n'ihu agha iji weta enyemaka ahụike nye ndị metụtara mpaghara ahụ. Omume ahụ mere ka gọọmentị France gafere ya nke ndị Legion of Honor.
Mgbe agha ahụ gasịrị, Edith Wharton kpaliri Saint-Brice-sous-Forêt. N'ebe ahụ ka o biri ruo ụbọchị ọnwụ ya na August 11, 1937, mgbe ahụhụ nke obi obi. Ozu ya dị na mpaghara dị nsọ nke Gonards, na Versailles.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » Oge nke Imeghị Ihe